Magaalada Galkacyo oo ay ka bilawdeen hawgallada la-dagaalanka burcad badeedda. – Radio Daljir
Magaalada Galkacyo oo ay ka bilawdeen hawgallada la-dagaalanka burcad badeedda.
Maarso 25, 2011 12:00 b 0
Galkacyo, Mar 25 – Iyada oo in dhawaale gobollada Puntland aad looga hadal hayay dedaallada dawlada Puntland ee ku salaysan la dagaalanka burcad badeeda berriga ayaa magaalada Gaalkacyo waxaa ka bilawday hawgallo lagu ugaarsanayo Kooxaha burcad badeeda ah.
Ciidamada bilayska ee gobalka Mudug ayaa labadii maalmood ee la soo dhaafay waxay ka wadeen magaalada Galkacyo hawgallo balaaran oo ay ku ururinayaan shaqsiyaadka lagu tirinayo in ay ku lug leeyihiin burcad badeednimada, waxayna ciidamadu gacanta ku soo dhigeen gawaari iyo dhallinyaro farabadan oo ay ku sheegeen in ay ka mid yihiin kooxaha burcad badeeda ah.
Badi dadka la xiray ayaa ciidamadu ka soo qabteen magaalada dhaxdeeda iyaga iyo gawaaridoodii, waxaase jira kuwo kale oo iyaguna laga soo qabtay meelo gaar ah oo ciidamadu ay hawgaladan ka fuliyeen.
Saraakiisha ciidamada bilayska ee gobalkan Mudug ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in hawgaladani ay yihiin kuwo lagula dagaalamayo kooxaha burcad badeedda ah, islamarkaana ay noqon doonana kuwo joogta ah.
Wadooyinta magaalada iyo xaafadaha dhexdooda waxaad maanta lagu arkayey ciidamo aad u farabadan oo ku labisan dirayska ciidanka bilayska Puntland oo baaraya gawaarida, kuna xaraynaya dhamaan shaqsiyaadka iyo gawaarida lala xiriirinayo falalkan burcad badeednimada.
Hawgalladani waxaa ay yimaadeen xilli ay jiraan dadaalo dheeraad oo dawlada Puntland ay ku bixinayso la dagaalkan kooxaha burcda badeeda ah ee berriga gobollada Puntland.
Gobollada Puntland ayaa dhaca, dherer ahaan, xeebta dheer ee Somaliya, kulaalana badweyna Hindiya iyo Badda Cas, waana tan inta badan keenta in burcad badeeddu ay gabaad ka dhigtaan xeebaha fog ee ku teedsan gobollada Puntland ee dhaca dhinaca badda.
Baahin: Khamiis, Mar 24, Weriye Khadar Cawl~ Daljir ~ Buuhoodle. “Mawqifkii Puntland ee Federaalka waxba iskama baddalin, wada-hadalse waa ka furan yahay” M/weyne Faroole … Garaad C/llahi Cali Ciid oo ka hadlay kacdoonka shacab ee dhex maanshaynaya Wadamada Carabeed … Gudd. gobolka Cayn oo cambaareeyey caburtinta saxaafadda & shacabka gobolka Sool … Abaaro saameeyey meelo ka mid ah gobolka Hiiraan; Duqa degmada Matabaan oo aan waraysanay …